DHALOOTA DHIIGAA! – Beekan Guluma Erena
DHALOOTA DHIIGAA!	Beekan Guluma Erena
General Category, Personal Category, Poems, Politics Category April 23, 2016April 23, 2016
5SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
Yooseef Hambaa Tolaa #OromoProtests
Dhaloonni dhiiga keessa daa’imee guddate alagaaf harka hin laatu!.Dhalli Oromoo kamiyyuu gaafa dachee kanatti dhufe, dhiiga maatii fi lammii isaa lola’u lafatti ilaalaa addunyaa kanaan wal bare. Baga nagaan dhufteen isaanii dhiigaan ta’aa ture. Har’as kan dhalachaa jiran waanum walfaakkaatutu isaan mudachaa jira. Yoo rafanis, deemanis, dhiigatu fuula isaanii dura lola’a. Dhaloonni du’a abjootaa deemu jechaadha. Lafee wiirtuu dugdaa isaaniitu suukannaa’aa deema. Sababnisaa lafee qomoo isaaniitu rukuttaan daakamaa jira. Gaafa abbaa fi haati isaanii gadi fuudhamanii oobdii mana isaanii keessatti tumaman ilaalaa guddatu. Gaafa rasaasaan isaan duratti rukutanii ajjeesan illee ni argu. Dhaloonni akkasitti guddatan kun maal karoorsaa akka jiran dhiigi dhangala’aa jiru salphaatti nutti hima. Wayyaanota biratti dhiigni afaan kan hin qabne yoo ta’eyyuu, seerri uumaa akka jedhutti dhiigni afaan qaba, ni dubbatas.
Gooti gaafa dirreetti ba’ee dhiiga diinaa dhangalaasu, osoo hin beekin dhiiga boorrachaa lola. Gaafa dhiigi itti faca’e kan duraa caalaa lolaaf humni isa jabaata. Sammuu fi hormoonii isaa kan guutee jiru xiiqii lolanii mirgaan galuuti. Onnee isaa bokoksee, dhaabbannaa isaa jabeeffatee diina irraa dhukkee kaasa. Ilmaan Oromoo immoo osoo dirree lolaa hin qaqqabin kaasuu Aayyoo isaanii keessatti dhiiga boorrachaa guddatani. Boorrachaas guddachaa jiru. Kun kaleessa, dheengadda, jalqabe osoo hin taanee ilmaan Oromoo waliin kan wal bareedha. Ilmi jilba abbaa isaa irra taa’ee dhiiga boorrate, gaafa dirreetti ba’e maal akka godhu tilmaamuun waan ulfaatu natti hin fakkaatu.
Biyya Impaayera Xoophiyaa jedhamtu kana keessatti Oromoon hidhamuu fi ajjeefamuun beekama. Oromoo qofaatu akkasi osoo hin taanee, kan Oromoo daangaadhuma dhabe. Baay’eeen ilmaan Oromoo abbaan isaanii mana hidhaa jira jedhanii beeku malee yoom akka hiikamu hin beekani. Abbaa carroomee argetu arga malee, kaanimmoo du’aa isaa illee hin argu. Qarriffaa diinaa seennaan as deebiin ulfaataadha. Kan waaqni gargaare immoo Aayyoo isaatti boqotee qabsoo saba isaatti fuulleffata. Baay’een immoo carraa kana hundaa dhabee qofaa roora’a. Maatii isaa hundaa diinni kan galaafatte baay’eetu jiru. Sammuun dhalootaa dhiigaan boora’ee jira.
Addunyaa kana irratti ani lafa Oromiyaa akkaa addaatan ilaala. Sababnisaa lafti Orommiyaa lafa dhiigaan aguugamteedha. Kanaafuu, dhaloonni hunduu dachee dhiigaan aguugamte keessa olii gadi kaachaa guddatu. Narra hin deemin ofiin jechuun hin jiru. Dhiigni keessa deeman sun dhaloota macheessee afaan qawwee dura dhaabaa tureera, ammas macheessee dhaabaa jira.
Garuu, alagaan dachee dhiigaan golgamte argee hin beekne gaaf dhufee camadatee qotu dhiiga dhaloota kanaa dhangalaasuudha. Qaama keenya kana yoo waa nu waraane hagam akka nu dhukkubu beekna. Akkasuma gaafa dhacheen Oromoo alagaan tuqamtu dhaloota dhiigaan guddate kana dhukkubbii hamaa itti kaasa. Kanaaf, dhaloonni Oromoo alagaaf obsuu hin danda’u. Dhiiga dhiigaan deebisna jedhanii aarsaa ta’aa turani, aarsaa ta’aas jiru.
Kiyyoon alagaa gootota Oromoof manuma jireenyaa taate. Kaan mana isaanii keessatti itti kiyyaassan; kaanimmoo bakka hojiitti, warra itti marsanii liqimsan immoo mana hidhaatti darbatani. Oromoof kan dubbatu hunduu shororkeessaa jedhamee maqaa fudhate. Lammii harka qulqulluuf gaafa maqaan kun kennamu mootummaa nama nyaataa kanaaf immoo maqaa akkamiitu kennama laata? Mootumma Xoophiyaamoo warra shororkeessitoota jedhamnii addunyaa raasaa jiran sanatu garaa jabaata laata? Shororkeessitootni addunyaa kana raasaa jiran iyyuu hagam akka ajjeesanii fi ajjeesuu kan hin qabne adda baasanii beeku. Mootummaan Xoophiyaa garuu kaayyoon isaa duguuggaa sanyii Oromoo waan ta’eef guddaa fi xiqqaa dacheetti naqaa oola. Akksitti mootummootiin abbaa irree Impaayera biyaattiitti jijjiiramaa bulan lafa Oromiyaa dhiigaan uffisan.
“Lukkuun haatee, haatee aalbee ittin qalan baasti” jedhee mammaaka Oromoon. Kan mootummaa wayyaanee kun immoo mammaaksa kana irratti dabalata waan qabu natti fakkaata. Aalbeedhuma qotee baafate sana luqqisee ittiin of qaluun isaa hin oolu. Yoo offitti rigee sodaate illee dhaloonni dhiigaan guddate kun karaa mormaa osoo hin taanee, mootummattii kana karaa qolee gadi qaluuf qopheedha. Mootummaa saamtuu, sobduu, darartuu, hiituu, fi ajjeestuun kun kana caalaa saba Oromoo nan rakkisa yoo jette of gowwoomsuu isheeti.
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa5SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← DHIIGA BOO’AA HINHAFNU!! –
DHALOOTA DHIIGAA! →